कुन सेलेब्रिटी के के खाना पकाउँछन् ?
Home मनोरञ्जन कुन सेलेब्रिटी के के खाना पकाउँछन् ?
काठमाडौँ — सेलेब्रिटी रोचक जीवन शैली बाँच्छन् । उनीहरूले गर्ने ससाना गतिविधि पनि फयानका लागि झन् रोचक नहुने कुरै भएन । करिअर चुल्याउन व्यस्त सेलेब्रिटी बाहिर मात्रै रमाउँदैनन् । उनीहरू घरका काममा समेत सरिक हुन्छन् । केही बलिउड सेलेब्रिटी यस्ता छन् जसले खाना पकाउँदा रमाइलो महसुस गर्छन् ।
अभिनेता अजय देवगन खाना पकाउन सिपालु छन् । उनी इन्डियन मात्रै हैन, चाइनिज डिससम्म बनाउँछन् । मीठो बिरयानी बनाउन रमाउने अजयले खाना पकाउने सीप भने बुबाबाट सिकेका हुन् रे । ‘उहाँ ग्रेट कुक हुनुहन्थ्यो,’ उनले भनेका छन् ।
अभिनेत्री ऐश्र्वया राय बच्चन र अभिनेता अभिषेक बच्चन भान्सामा पस्न जाँगरिलो महसुस गर्छन् रे । उनीहरू दुवै परिकार बनाउन सोखिन छन् । केहीअघि एउटा मिडियामा अभिषेकले खाना पकाउँदा तनाव कम हुने बताएका थिए ।
चिकन करी अत्यन्त मीठो बनाउने दावा गर्ने अभिषेकको यो क्षमता धेरैलाई थाहा छ्रैन । ऐश्वर्याले भने अहिले पनि आमासँगै नयाँ–नयाँ परिकार पकाउने कला सिक्दै छिन् । उनलाई परिवारसित भान्सामा बसेर मिठामिठा खानेकुरा बनाउन अत्यन्त रमाइलो लाग्छ रे ।अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले पनि आमाको रेसिपीबमोजिम पकाउन जानेकी छन् । उनका अनुसार, धेरै अभिनेत्री भान्साको काम गर्न जान्दैनन् । तर, आफू भने सजिलै खाना बनाउन सक्ने उनको दाबी छ ।
योग गुरु भनेरसमेत चिनिने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीलाई साथीभाइलाई बोलाउन र आफूले पकाएका परिकार चखाएर सरप्राइज दिन रमाइलो लाग्छ । उनमा पकाउनुका साथै व्यवस्थित घर सजाउने क्षमतासमेत छ । शिल्पाले बनाएको चिकन करी निकै स्वदिलो लाग्ने हालै उनका पतिले ठोकुवा गरेका थिए । अभिनेत्री कंगना रनावत सानैदेखि खाना पकाउने गर्थिन् । फिल्मी करिअरमा संघर्ष गर्दादेखि अहिले सफलताको चुचुरोमा पुग्दा पनि उनले खाना पकाउन भुलेकी छैनन् ।
उता अभिनेता अक्षय कुमारको परिचय कलाकारमा मात्रै सीमित छैन । फिल्ममा आउनुअघि अक्षय होटलमा मास्टर सेफको जागिर नै खान्थे । मार्सल आर्टका खेलाडीसमेत रहेका अक्षय थाई चिकन करी मीठो बनाउँछन् ।
ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाको जित
‘क्याप्टेन’ को छायांकन हिजोबाट सुरु,